Sakafo manankarena amin'ny iode: inona no hohanina hisorohana ny tsy fahampiana | Nutri Diet
Sakafo manankarena amin'ny iode
Michael Serrano | | sakafo, sakafo
Ny sakafo manan-karena iode dia hanampy anao hanome ny vatanao ny habetsaky ny mineraly ilaina amin'ny vatanao. Iodine dia tena ilaina amin'ny fampandehanana tsara ireo fiasa tena lehibe.
Fa inona ny asany? Fantaro izay ilain'ny iode, ahoana ny fomba hahitana izany amin'ny sakafonao, ary inona no mety hitranga raha tsy mandray tsara ianao:
1 Ny anjara asan'ny iode amin'ny vatana
2 Fomba ahazoana iode
2.1 Sira vita amin'ny jiro
2.3 Trondro sy hazan-dranomasina
2.4 Vokatra vita amin'ny ronono
2.6 Voankazo sy legioma
2.7 Sakafo bebe kokoa misy iode
3 Tsy fahampiana iode
Ny anjara asan'ny iode amin'ny vatana
Mila iode ny vatanao mba hahafahany mamokatra hormonina tiroida, toy ny tirroxine sy triiodothyronine. Izy ireo dia mifehy ny metabolisma ary tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny ati-doha.
Satria mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny rafi-pitabatabana sy ny taolana izy io, Ny fahazoana yode ampy dia manan-danja mandritra ny fiainana, fa indrindra hatramin'ny zaza ao am-bohoka ka hatramin'ny fahatanorana.
Fomba ahazoana iode
Ny olon-dehibe salama dia tombanana fa mila iodine 150 microgram isan'andro. Satria ny tsy fahampian'ny iode dia mety hahafaty ny fivoaran'ny ati-doha, ny tahiry ilaina isan'andro dia mitombo 220 mcg sy 290 mcg mandritra ny fitondrana vohoka ary raha mampinono koa.
Manahy ve ianao fa tsy ampy iode? Noho ny atiny ao amin'ity mineraly ity, Raha mihinana ireto sakafo manaraka ireto tsy tapaka ianao dia misy vintana tsara fa ampy ny haavonao.
Sira vita amin'ny jiro
Ny sira dia ampahany amin'ny sakafon'ny ankamaroan'ny olona, ​​ka izany no fomba mora indrindra ahazoana iode. Na izany aza, tokony ho azonao antoka ny mampiasa sira misy ioda fa tsy sira mahazatra handrahoana ao an-trano. Ny iodisation sira dia paikady iray izay nanampy tamin'ny fampihenana ny tsy fahampian'ny iode sy ny vokany (toy ny cretinism sy goiter) eo amin'ny mponina.
Ny fihinanana legioma an-dranomasina dia manampy amin'ny fihazonana mineraly tena ilaina marobe, anisan'izany ny iode, ao amin'ny vatana. Ho fanampin'izany, ambany dia ambany ny kaloria azon'izy ireo ary mihamaro hatrany amin'ny fivarotana lehibe sy trano fisakafoanana andrefana. Ireto misy anarana ahidrano vitsivitsy mendrika hotadidina:
Trondro sy hazan-dranomasina
Fomba iray hafa ahazoan'ny vatana ny iode dia ny fihinanana trondro sy akorandriaka. Amin'ny ankapobeny, ny sakafo rehetra avy amin'ny ranomasina dia manome anao iode, manomboka amin'ny makamba ka hatramin'ny hazandrano, amin'ny alàlan'ny cod. Izany no mahatonga ny olona any amin'ny faritra amoron-tsiraka (izay mihinana trondro betsaka kokoa) mihinana iode avo kokoa.
Ny ronono sy ny avy aminy (yaorta, gilasy, fromazy ...) dia manao ny azy ihany koa raha ny haavon'ny ioda dia misy. Na izany aza, tolo-kevitra ianao fa tokony ho ambany tavy ny vokatra vita amin'ny ronono hisorohana ny lanjany be loatra sy ny hatavezina.
Rye, oatmeal, mofo fotsy ary vary Izy ireo dia anisan'ny serealy manome iode indrindra.
Na dia tsy mandray anjara betsaka amin'ny sakafo avy amin'ny ranomasina aza izy ireo dia azo atao ihany koa ny mahazo iode amin'ny alàlan'ny voankazo sy legioma. Diniho ny fampidirana azy epinara, kôkômbra, broccoli ary prun amin'ny sakafonao.
Sakafo bebe kokoa misy iode
Atody, hena mena ary saosisy dia sakafo hafa manome iode. Na izany aza, tsy midika izany hoe salama izy ireo. Raha ny marina dia nanoro hevitra anao ny hametra ny fihinananao.
Ny dokoteranao dia mety hanome soso-kevitra amin'ny fihinanana fanafody fanampiny raha tsy ampy ny fanovana ny sakafo fihinanao. rehefa tonga amin'ny ambaratonga iode mahasalama. Tsy tsara ny hitondra azy ireo samirery, satria ny iode dia mety hisy vokany ratsy mitovy amin'ny tsy fahampian'ny.
Tsy fahampiana iode
Ny loza ateraky ny tsy fahampian'ny iode dia avo kokoa amin'ny olona manaraka sakafo vegan sy tsy misy ronono. Satria misy fanapahana mahery vaika amin'ny fihinanana sira, ny fisakafoanana hitsaboana tosidra na aretim-po dia mety hiteraka tsy fisian'io mineraly io ihany koa.
Ny tsy fahampian'ny iode dia mety miteraka goiter ary hypothyroidismary koa ny olana mandritra ny fitondrana vohoka. Goiter dia fihary tiroida lehibe kokoa. Iray amin'ireo soritr'aretiny ny fivontosan'ny vozona. Io toe-javatra io dia miteraka fahasarotana amin'ny torimaso ary na miaina aza. Ny famantarana ny hypothyroidism dia misy fiakarana tampoka, havizanana, hoditra maina ary fahaketrahana.
Ny zaza vao teraka dia mety mijaly amin'ny olana maromaro noho ny tsy fahampian'ny iode, izay no antony ilana ny vehivavy mitandrina ny ambaratonga azy mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fampinonoana. Ny tsy fahampiana an'io mineraly io no antony lehibe mahatonga ny fihenan'ny sain'izao tontolo izao. Heverina fa ny IQ an'ny olona dia azo ahena hatramin'ny 15 isa, na dia fatiantoka malemy aza izany. Ny zaza koa dia mety ho hyperactive na teraka tsy tonga volana na tsy ampy lanja noho io toe-javatra io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Sakafo manankarena amin'ny iode